Musiyano uripo pakati peAYY machira uye machira ekotoni
Hunhu hwemachira eATY. Parizvino, izvo zvigadzirwa zvemicheka yeATY pamusika zvakanyanya nylon uye polyester. Pakati pavo, polyester ine mutengo wakajeka. Muchokwadi, mushure memakore mazhinji emakore ekuvandudza, machira emakemikari machira haasisiri iwo epasi-magumo nhumbi nematanga ...
Kuzivikanwa kwemication cationic
Chii chinonzi cationic jira? Micheka yeCationic inogadziriswa nenzira dzakasarudzika dzepanyama kugadzira cationic tambo senge cationic polyester yarn kana cationic nylon yarn. Saka nei zvichidikanwa kuti zviitwe mumucheka wecationic? Nekuti musika unoda. Cationic yarns yakanyanya kupisa tembiricha, saka durin ...
Musiyano uripo pakati pejira rejezi uye jira rakabatana
1, Chimiro musiyano pakati pejira rejezi nejira rakapindirana rejira rakapindirana jira rine maitiro akafanana pamativi ese, uye jira rejezi rine rakadzika pasi pevhu. Kazhinji kutaura, jira rejezi rakasiyana pamativi ese, uye jira rakapindirana rakafanana kumativi ese, ...
Ndeipi machira anoshandiswa kushambira?
Kuzivikanwa kwemicheka yekushambira kwave kuri kuitika kwenguva yakareba. Paunenge uchisarudza machira ekushambira, haufanire kungosarudza machira anotaridzika zvakanaka, asi zvakare sarudza machira ane mashandiro akanaka uye emhando yepamusoro, uye anogona kuve akasununguka mukushandisa. Kana isu tichisarudza yakanaka jira rekugeza ...
Shiri yeziso jira chimiro uye mashandisiro
Shiri yeziso mesh jira, isu tinowanzoidaidza kuti "jira rehuchi" - ndeye weft yakarukwa jira. Inogona kugadzirwa nepolyester kana donje, uye iyo fekitori inowanzo gadzira polyester shiri yeziso jira. 100% polyester fiber yakarukwa uye yakagadziriswa nekudhaya nekupedzisa, mazhinji ezvigadzirwa anoshandiswa ku ...
Nhau nezve simba mesh jira
1, Chii chinonzi simba mesh jira Kazhinji simba mesh jira rakagadzirwa nepolyester / nylon ine spandex, zvinoita kuti ive yakatwasuka chaizvo. Simba mesh ndeye yakasimba jira rakaringana yekumanikidza mbatya dzakadai senge yekupfeka, yekutamba kupfeka, yekushambira, zvigadzirwa zvekurapa, uye kugadzira bhurugwa nemukati ...
Sublimation kudhinda- imwe yeakanyanya kudhindwa epasirese
1. Chii chinonzi sublimation kudhindwa Mushure mekushambadzira kwemidziyo inopisa ...
Chii chinonzi dijitari yekudhinda machira?
Dhijitari kudhinda chiitiko chinonakidza kwazvo muindasitiri yemachira. Rudzi urwu rwekudhinda runovhura mikana yekugadzirisa, kudhinda kudiki, uye kuyedza! Dhijitari yekudhinda inoshandisa inkjet kudhinda tekinoroji yekunyora mapepa ekushandisa. Saka nekuvandudza tekinoroji, wi ...
Ndeipi nzira ina yekutambanudza jira
Nzira ina-yakatambanuka rudzi rwejira rine kusimba kwakanaka kunonyanya kushandiswa pazvipfeko, senge masutu uye mbatya dzemitambo nezvimwewo micheka yeSpandex inogona kukamurwa kuita machira ekuruka, machira ewft, uye warp uye weft maviri-nzira anotambanudza machira (anonziwo ina-nzira kutambanudza) zvinoenderana nezvinodiwa ...
Iko kubuda uye kufarirwa kwe polycotton machira
Polyester nekotoni zvine zvazvakanakira nekuipira. Kuitira kuti vadzikise zvakanakira zvavo uye vazvigadzirire zvikanganiso zvavo, muzviitiko zvakawanda, zvinhu zviviri izvi zvinosanganiswa mune chimwe chikamu kuti zviwane migumisiro inodiwa muhupenyu hwezuva nezuva-polyester donje Fa ...
RPET machira- sarudzo iri nani
RPET machira kana kuti yakashandiswazve polyethylene terephthalate irudzi rutsva rwezvinhu zvinogadziriswa uye zvinogadzirika izvo zviri kubuda. Nekuti ichienzaniswa neyepakutanga polyester, simba rinodikanwa reRETET kuruka rakaderedzwa ne85%, iyo kabhoni nesarufa dioxide inoderedzwa ne50-65%, uye kune 90% kuderedzwa ...
Nhanganyaya yemachira ejuzi
Swimsuits inowanzo gadzirwa nemachira asinga saguti kana kubhururuka kana aoneswa kumvura. Izvo zvakajairika zvemachira ekushambira ndeye nylon uye spandex kana polyester uye spandex. Iko kune flat-screen kudhinda uye kudhinda kwedhijitari, uye ikozvino mazhinji acho ari flat screen kudhinda. Kudhinda kwedhijitari ...
Musiyano uripo pakati peAYY machira nemubhedha ...
Hunhu hwemachira eATY. Parizvino, izvo zvigadzirwa zvemicheka yeATY pamusika zvakanyanya nylon uye polyester. Pakati pavo, polyeste ...
Chii chinonzi cationic jira? Micheka yeCationic inogadziriswa nenzira dzakasarudzika dzepanyama kugadzira cationic tambo senge cationic polyester yarn kana cation ...